Home Wararka Shirka G7 ee Wasiirada Arimaha Dibada iyo Horumarinta: War Murtiyeed, London, 5...
Shirka G7 ee Wasiirada Arimaha Dibada iyo Horumarinta: War Murtiyeed, London, 5 May 202.
Waa markii ugu horreysay ee ay waddamadaan toos uga hadlaan Somaliya ilaa ay ka soo baxday Ku Meel Gaarka, waxayna muujineysaa cabsi ah in dalka mar kale dib loogu celiyo KMG, taas oo ay sababtay doorashadii fudeydka ahayd ee ay Xildhibaanaada Somaliyeed ku doorteen shakhsi aysan si fiican uga baaran dagin, kaas oo ah Maxamed Cabdulaahi Farmajo.
Wakiilada ummad ee gala Barlamaanada dalalkooda waxay mar waliba ka fekeraan cidda ay hogaanka dalka u dhiibayaan inuu dalka geeyo Meesha uu markaas joogo meel ka wanaagsan, waxayna mar waliba ilaaliyaan danta guud oo ay wax badan iyagana ka faa’iidaan marka dalka guud ahaan uu hagaago. Hasa yeeshee Barlamanka oo si laab lakac ah ku doortay shakhsi wax dumin u sameysan ee aan wax dhisin iyo iyaga oo awoodi waayey inay usha dhexda ka qabtaan si loo saxo waxa uu khalday kuna soo celiyaan distuurka dalka, ayaa waxay ka dhasahy in maanta qarka loo saaran yahay in Madaxtooyadii muddo 20 sano ah qalin lagula kala wareegayey hadda lagula kala wareego qori caaraddii. Waana sababta casida leh ee ay dad badan oo Somaliyeed u qabaan in Farmajo aysan suuragal ahayn in talada looga wareejiyo wax aan xoog iyo inuu cabsado ahayn.
Golihii shacbiga ayaa waxaa u muuqdaa inuu yahay mid Farmajo u kireysan oo u sameeya waddo kasta oo sharcidarro ah iyo inuu siduu rabo ka yeelo Distuurka oo uu baal maalin ka jeexo.
Haddaba waddamada dhaqaalaha leh ee Somaliya biila ayaa waxay shirkoodii sannadlaha ahaa uga hadleen arrinta Somaliya, waxayna ka soo saareen qoraalkan hoose oo aan idiin Tarjumnay.
“Anaga oo ah, Wasiirada Arimaha Dibadda iyo Horumarinta ee Kooxda Toddoba (G7), iyo Wakiilka Sare ee Midowga Yurub, waxaan maanta la shireynaa marxalad xasaasi ah oo dadkeenna, dhulkeenna, nabadgelyadeenna iyo mustaqbalkeenna wanaagsan.
“Waxaan aad uga walaacsanahay jahwareerka siyaasadeed ee ka taagan Soomaaliya, iska hor imaadyadii dhawaa ee rabshadaha watay ee u dhexeeyay dowladda iyo xoogagga mucaaradka ku ah, iyo cawaaqibka bani’aadamnimo ee ka dhashay. Waxaan ka xumaanay go’aanka lagu kordhiyay mudada Maxamed Farmaajo ee Madaxweynaha iyo Baarlamaanka Soomaaliya laba sano taas oo aan xal u aheyn culeysyada socda ee geeddi socodka doorashooyinka, laakiin taa bedelkeeda waxay wiiqaysaa kalsoonida lagu qabo hoggaanka Soomaaliya, waxayna khatar ku tahay horumarka Hay’adaha Soomaaliyeed, waxayna halis ku yihiin nabadgelyada iyo mustaqbalka dadka Soomaaliyeed.
Waxaan soo dhoweyneynaa ansixintii Baarlamaanka ee 1dii Maajo ee ahayd dib u bilaabashada wadahadallada u dhexeeya Dowladda Federaalka iyo hoggaamiyeyaasha Dowlad Goboleedyada Xubnaha ka ah Federaalka oo ujeeddadiisu tahay dhameystirka qaabka doorashada ee ku saleysan heshiiskii 17-kii Sebtember.
Waxaan hoosta ka xarriiqeynaa diidmadayada waxqabad kasta oo dheeri ah oo horseedaya kordhinta muddooyinka hore iyada oo aan taageero ballaaran laga helin daneeyayaasha Soomaaliyeed isla markaana aan ka soo horjeedno geeddi-socodyada isbarbar socda ama doorashooyinka qeybta ah Waxaan ka codsaneynaa madaxda Soomaaliya inay muujiyaan is xakameyn oo ay ka waantoobaan ficil kasta oo dheeri ah oo keli ah oo kicin kara xiisadaha siyaasadeed ama rabshadaha.
Waa muhiim in dhammaan dhinacyada ay isdajiyaan oo ay ilaaliyaan xasilloonida iyo amniga Soomaaliya. Waxaan soo dhoweyneynaa go’aanka Golaha Nabadda iyo Amniga ee Midowga Afrika ay ku magacaabeen Ergey gaar ah waxaanan diyaar u nahay inaan taageerno dadaalladaas. Waxaan ka codsaneynaa madaxda Soomaaliya in ay ilaaliyaan waajibaadka ka saran dadka Soomaaliyeed iyaga oo si deg deg ah ugu laabta wadahadalada.
Waxaan codsaneynaa inay galaan wadahadal wax ku ool ah, raadiyaan xalal wax ku ool ah isla markaana ay heshiis ka gaaraan arrimaha harsan. Haddii taa la waayana waxay horseedi doontaa in beesha caalamku wax ka bedesho qaabkii ay ula dhaqmi jirtay Soomaaliya.”
Dhinaca kale, shir ay shalay la yeesheen beesha caalamka RW Rooble ayey ugu shegeen inaysan aqbalayn inuu arrimaha doorasha saameyn ku yeesho M.Farmajo, kadib markii ay u caddaatay inuusan doorasho rabin in la qabto ama uu rabo in la lumiya hamuunta ay dadka u qabaan doorashada.
Waxaa sidoo kale muuqata inuu Farmajo uu aad uga xun yahay heshiiskii taarikhiga ahaa ee shalay 5/5/21 dhex maray mucaaridka iyo RW Rooble oo lagu kala qaadayey ciidamada isku hor fadhiya Xamar. Madaxtooyada dalka ayaan soo dhoweynin heshiiskaas, mana jirto wax bogaadin ah oo uu M. Farmajo u soo jeediyey RW Rooble iyo Mucaaridka isfahamka ay gaareen, waana waxa caddeynaya inuu Farmajo yahay qof aan wax wanaag ah dalkaan la rabin, golaha shacbigana uu ijaaran yahay.
Halka ugu dambeysa waxaa ka muuqata diginiin iyo hanjabaad wada socda, taas oo aan saameyneyn oo kaliya Farmajo ee la dageysa dalka oo dhan, sidoo kalana taariikh xumo ku reebeysa barlamanka 10aad ee dalka, gaar ahaan golaha shacbiga oo noqon doona golihii ugu xumaa ee soo mara taariikhda Somaliya, kuwaas oo dalkooda oo soo kabanaya lugaha ka jaray oo ku celiyey meel uu si dhib badan uga soo baxay, waana dhaxalkii Madaxweyne Maxamed Cabdullahi Farmajo la dhaxlay.